Somaliland: Suldaan Cumar: “Madax-dhaqameedka Nabad baa lagu ogaa. Maaha inay Nabadda iyo Nolosha Ummadda burburiyaan.” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Suldaan Cumar: “Madax-dhaqameedka Nabad baa lagu ogaa. Maaha inay Nabadda iyo...
Suldaanka Guud ee beelaha Arab Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka Dararweyne ee Degmada Ceel-Afweyn ee gobolka Sanaag.
Suldaan Cumar Suldaan Maxamed waxa uu sidoo kale baaq u diray saalaaddiinta Somaliland, oo uu u soo jeediyay inay ka ekaadaan xayndaabka dhaqanka, isla markaana ay dawladda uga dambeeyaan hawlaha ay u xilsaaran tahay oo aanay wakhti isaga luminnin sii-kala-fogaynta iyo collaysiinta shacabka Somaliland ee walaalaha ah.
Suldaan Cumar waxa uu sidaasi sheegay mar uu maanta ka hadlayay munaasibad ay xilka kula kala wareegayeen Agaasimihii Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Abokor Maxamed iyo Agaasimaha Guud ee Madaxweynaha Somaliland Wasaaraddaas u soo magacaabay Md. Maxamed Faarax Xareed.
“Xukuumadda ayaa u xil saaran inay gacan adag ku qabato (beelaha diriraya). Waxan laysku haystaa waa dhulkii dawladdu xukumaysay… Wax Alle wax laysku dilayo cidi garan mayso. Intii innaga dhimatay Ilaahay ha u naxariisto, inta innaga dhaawacantayna Allaah ha caafiyo. Meeshaa yaan cid dambe innagaga dhiman. Dawladdu gacan adag ha ku qabato, bulshaduna ha ku garab gasho” ayuu yidhi Suldaan Cumar Suldaan Maxamed.
Suldaan Cumar waxa uu sidoo kale baaq u diray Salaaddiinta Somaliland oo maalmihii u dambeeyay qaarkood ku baaqeen hadallo waxyeello u geysan kara nabadgalyada iyo midnimada guud ee bulshada, waxaanu yidhi: “Qodobna waxaan leeyahay odayaashan madax-dhaqameedka ah. Madax-dhaqameedka waxa lagu ogaa nabad. Ummadda inay nabaddeeda iyo nolosheeda ka shaqeeyaan baa la doonayaa. Maaha inay nabadda iyo nolosha ummadda burburiyaan. Waxaan leeyahay, ku soo noqda dariiqii aad hore u hayseen oo nabadda ka shaqeeya”.
Dhinaca kale, Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax waxa uu ka warramay shakhsiyadda iyo hoggaaminta Agaasimihii Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Abokor Maxamed, isaga oo Madaxweynaha ku bogaadiyay xulashada uu mar kale Agaasime Abokor ugu magacaabay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Horumarinta Maalgashiga.
“Axmed Abokor waa nin dhallinyaro ah. Laakiin waa nin intiisa ka weyn. Waa tusaale fiican oo bulshada iyo dhallinyaraduba ku dayan karaan. Waxaan u rejaynayaa in uu noqdo mid meesha uu tegayana (Wasaaradda Horumarinta Maalgashiga) noqdo mid ku filan oo ku firfircoon. Madaxweynaha waan ku hambayaynayaa inuu abuuro Wasaaradda Maalgashiga, waayo waxaynnu nahay dal kobcaya oo maalgashi u baahan” ayuu hadalkiisa raaciyay Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax.
Somalia: Roadside bomb in Somalia kills 9 soldiers ,police say
Somaliland: Wasaaradda Maalliyada Oo Bilowday Odoroska Miisaanniyad-sannadeedka 2018-ka Iyo Meellaha Mudnaanta la Siinayo
Somaliland: Wafti Uu Hoggaaminaayo Guddoomiyaha KULMIYE Oo Dalka Kenya Kulan Kula Yeeshay Safiir Ku-xigeenka Safaarada Maraykanku Ku Leeyahay Dalkaas.